Different kinds of Buddhism which are allowed or harassed in Myanmar ခွင့်ပြုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ခွင့်မပြုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« pt 1 of 18 – DAVE HUNT vs. SHABIR ALLY (BIBLICAL CHRISTIANITY vs ISLAM)
တောင်ကြီးမှာ ဖမ်းခံထားရတဲ့မွတ်စလင်၂၀ဦးရဲ့ ရှေ့နေနှင့်တွေ့ဆုံခန်း »
Different kinds of Buddhism which are allowed or harassed in Myanmar ခွင့်ပြုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ခွင့်မပြုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ
@ Ko Kyaw Myo Win….May I answer and clarify your question?….
ခွင့်ပြုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ = Supporters and servants of the Military Government eg Wirathu, Thidagu ( Who said thatGenerals would become Buddha) 969 and now Ma Ba Tha monks (including former MI moles and Military implanted FAKE monks.
(Even Wirathu and Shwe Nya War were not allowed to reenter monkhood when they had good relations with Muslims. Once they were BRAINWASHED back to Anti-Muslim only they are supported by the Military Government. LOOK Wirathu’s Multi-religious prayers and speeches were BLOCKED by the Mdy PM Ye Myint at first. But NOW he is FREE to spread HATE SPEECHES…
ခွင့်မပြုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ = Penang sayardaw, U Gambira, Shwe Nya War (once he distanced from Wirathu and support DAASK) 2007 TRUE MONKS.
I am 100% sure…Hinayana Bama Military would never give (may be dare not) visa for Peace loving-preacher Dalai Lama BUT had given the VISA and would give visa for TERRORIST Sri Lanka Monks from BBS Bodu Bala Sena.
Ko Kyaw Myo Win ဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ် ဘုရားဟောကျမ်းစာတွေအပြည့်
စုံရှိပါရဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုဟောပြော ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာအမည်မတတ်နဲ့လေ. အစိုးရကြိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာက ဘယ်ဟာလဲ မကြိုက်တာကဘယ်ဟာလဲ ရှင်းပါအုံး…
U Aung Tin ကုိုမျိုးဝင်းရေ – အသေးစိပ်တော့ မသွားပါရစေနဲ့။ ခင်ဗျားတုို့ဟောတဲ့အထဲမှာ ဘုရားဟော၊ ပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ ဆန့်ကျင်တာပါသလားလုို့ မုိုးပြာဂုိုဏ်းကုိုသာ မေးပါ။ သူတုို့ ဖြေတာကုို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ ခင်ဗျားက နားထောင်ပါ။ ပြီးတော့မှ ဆုံးဖြတ်ပါ။ မကြာခင်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ သံဃာ့အစည်းအဝေးကြီးတစ်ခုမှာ သီတဂူဆရာတော်က ခေတ်လည်းပြောင်းလာပါပြီ။ ဟုိုဂုိုဏ်း ဒီဂုိုဏ်းတွေကုို ပိတ်ပင်တာတွေ မလုပ်သင့်တော့ဘူးလို့ လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာပါဗျာ
Kyaw Myo Win ဟိုဂိုဏ်းဒီဂိုဏ်းပိတ်ပင်တာကုိအားပေးတာမဟုတ်ဘူး
ဒီနေ့ ( 7-10-2014) နေ့ အကျဉ်းသား ( ၃၀၀၀) ကျော် အား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် လွှတ်ပေးရာတွင် မြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက် လာသူများထဲတွင် ရှင်ဥာဏ ပါ မပါ စောင့်မျှော် နေကြရ ပါသည့်
This entry was posted on October 11, 2014 at 10:09 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.